Umphathi Womkhankaso We-LinkedIn Ukhipha Okuhlangenwe Nakho Komkhankaso Wayo Omusha | Martech Zone
Umphathi Womkhankaso We-LinkedIn Ukhipha Okuhlangenwe Nakho Komkhankaso Wayo Omusha Kakhulu
NgoLwesine, July 26, 2018 NgoMsombuluko, Julayi 23, 2018 Douglas Karr
I-LinkedIn imemezela ulwazi lokubika olwenziwe kabusha lwe- Umphathi Womkhankaso We-LinkedIn, okwenza kube lula ukuqonda ukuthi imikhankaso yakho isebenza kanjani. I-interface entsha inikeza okuhlangenwe nakho okuhlanzekile nokunembile okukuvumela ukuthi uphathe kalula futhi uthuthukise imikhankaso yakho.
Izithuthukisi Zomphathi Womkhankaso We-LinkedIn Zibandakanya:
Yonga isikhathi ekubikeni komkhankaso - Ngalolu lwazi olusha lokubika, ungabona ngokushesha ukuthi imikhankaso yakho isebenza kanjani futhi wenze ukulungisa okundizayo ukuthuthukisa imiphumela. Idatha kuMphathi Womkhankaso manje ilayisha amaphesenti angama-20 ngokushesha, ikuvumela ukuthi uskene idatha kahle kakhulu - noma ngabe unamakhulu emikhankaso nabadali bezikhangiso. Futhi, isakhiwo esisha se-nab sikuvumela ukuthi ushintshe kusuka kuma-akhawunti uye kumikhankaso uye ezikhangisweni ngokuchofoza kabili. Sibuye sibuyekeze amakhono okusesha, ngakho-ke kuthatha imizuzwana embalwa ukubuza imikhankaso ethile ngegama lomkhankaso, i-ID yomkhankaso, ifomethi yesikhangiso nokuningi.
Qonda ukusebenza komkhankaso futhi ukwandise ngokushesha - Lapho izikhangiso zakho zingasebenzi kahle, udinga ukuthatha isinyathelo ngokushesha ukuze wenze okulungile. Kungakho singeze izici ezintsha ukukusiza wenze izinqumo zomkhankaso ngokushesha okukhulu kunangaphambili. Okuhlangenwe nakho okusha kokubika kufaka ukuphuka kokuchofoza okukodwa kukunikeza ukuqonda okujulile kuzinkomba ezibalulekile njengemicimbi yokuguqula nokubekwa ku-LinkedIn Audience Network.
Yenza ngezifiso umuzwa wakho wokubika - Manje usungakhetha ukubukwa kwamamethrikhi okukhathalela kakhulu, noma ngabe Ukusebenza, Ukuguqulwa noma iVidiyo.
Ngokuya nge-LinkedIn, lokhu kukhishwa kuyisinyathelo sokuqala sohlelo lomkhiqizo wesikhathi eside.
Qalisa isikhangiso se-LinkedIn
Tags: ukubikwa kwesikhangiso se-linkedinizikhangiso ze-linkedinukukhangisa kwe-linkedinumphathi we-linkedin womkhankaso
Ungayilinganisa Kanjani i-ROI Yemikhankaso Yakho Yokukhangisa Ngevidiyo
Ungabathumela kanjani kabusha abasebenzisi ngokususelwa endaweni yabo ku-WordPress